Go'aankii Puntland oo laga cabsi qabo inuu dagaal ganacsi abuuro - Caasimada Online
Home Warar Go’aankii Puntland oo laga cabsi qabo inuu dagaal ganacsi abuuro
Go’aankii Puntland oo laga cabsi qabo inuu dagaal ganacsi abuuro
Gaalkacyo Caasimada Online) – Kadib markii maamulka Puntland amar ku soo rogey Gadiidka isaga gooshaya Koonfurta iyo gobolada Woqooyi Barri ee Somalia ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin la xiriira dhinacyada ay khuseyso arimahaan.
Ganacsatada Puntland ayaa raashinka iyo badeecadaha kala loo yaaqaan bagaashka u dhoofiya gobolada dhexe ee Somalia halka badeecadaha kasoo baxa dalaga kala duwan ee beeraha kuwasoo laga helin Puntland iyo Xoolaha loo dhoofiya wadamada Carabta laga keeno Koonfurta Somalia.
Gobolada dhexe ee Somalia ayaa aad ugu xiran badeecadaha ka yimaada Puntland madaama kala xirnaanshaha ay sababtey amni xumada ka jirta saameyn ku leedahay.
Hadal kasoo baxay afhayeenka xukuumada Puntland dhowaan ayuu ku sheegey in amarkii lagu soo rogey Gadiidka isaga goosha Koonfurta iyo degaanada Puntland si wanagsan u socdo islamarkaana shaqo abuur u sameeyey dadka daga magalaada Galkacayo.
Waxaa jira cabashooyin kasoo baxaya ganacsatada Puntland iyo Koonfurta Somalia kuwasoo ah sameynayta ay yeelatey xornimadii ganacsiga oo xukuumada faragalin buuxda ku sameysay.
Dhinaca kale siyaasiyiinta maamusha gobolada Koonfureed ee Somalia ayaa iyaguna arinkaan ka hadley kuwasoo ku eedeeyey madaxda Puntland in talabadaan khaldan tahay dib-na uga noqdaan.
Xubnaha ugu dambeeyey ee ka hadlay waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Hiraan kasoo digniin u direy maamulka Puntland isagoo ka dalbadey iney soo fasaxaan Gadiidka ay ka haystaan ganacsadaha gobolkaan.
Dabageed ayaa sheegey in ganacsiga Puntland iyo gobolka Hiraan isku xiran yahay iyadoo ganacsatada goboladaas ku sugan yihiin magalaada Baladweyne kuwasoo aan wax dhibaato ah la Kulmin.
Gudoomiyaha ayaa sheegey in ganacsatada Puntland xoolaha ka iibsadaan gobolka Hiraan islmarkaana ku naaxsadaan xoolahooda halka Gadiidka laga lahaa gobolkaan ku xayiran yahay Galkacayo isagoo laga furtey taarikadii Puntland.
Hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli mas’uuluyinta Puntland aaminsan yihiin in talabadaan wax badan ka qabaneyso amniga gobolada ay ka arimiyaan.